🥇 ▷ Kahor bilowga World Monster Hunter World: Iceborne waxaan heli doonnaa macluumaad ku farxi doona taageerayaasha ✅
Kahor bilowga World Monster Hunter World: Iceborne waxaan heli doonnaa macluumaad ku farxi doona taageerayaasha
Capcom wuxuu ka faa’iidaystay PAX West si uu u muujiyo ciyaarta cusub ee Monster Hunter World: Iceborne, ballaarinta cusub ee ciyaarta oo ku dari doonta daanyeer cusub, khariidado iyo wixii la mid ah, taasoo ciyaarta ka dhigeysa wax gabi ahaanba cusub sannad iyo badh ka dib markii la siidaayay. Thanks to YouTube isticmaale Tom, oo soo aruuriyay fiidiyowga iyo Twin iyaka, oo ku soo bandhigaya wararkiisa, waan ognahay taas Capcom waxay diyaarisaa macluumaad xiiso leh oo ka socda Monster Hunter World: Iceborne Taasi waa ka farxin doontaa taageerayaasha. Fiidiyowga waxaan ku arki karnaa ugaarsiga Acid Glavenus iyo xitaa dagaal aan toos ahayn oo lagula jiro Tigrex. Kantaroolka demo ayaa ah Maareeyaha Bulshada Yuri Araujo.
Qaybta xiisaha leh ee waxa la muujiyaa waxay ku dhowdahay dhamaadka fiidiyowga, marka soo saaraha ciyaarta Ryozo Tsujimoto uu masraxa ka baxo si uu u sii daayo farriin kama dambeys ah oo ay macquul tahay in dad badani aysan heli doonin sababtuna tahay tarjumaadda uu sameeyay tarjumaanka. Iyaga oo ka faalloodaa halka loo yaqaan ‘Twinless’, Tsujimoto wuxuu xaqiijiyey in Capcom ay soo bandhigi doonto kahor Monster Hunter World: Iceborne ayaa la saarayaa iibka macluumaad cusub oo ah «Farxi doonaan taageerayaasha» waxayna nagu dhiirigelisaa inaan la soconno tan ka hor bilaabista Iceborne.
Gaar ahaan garan mayno macluumaadka xiisaha leh ee Ryozo Tsujimoto u gudbin karo, kiisku waa inaanu ka warhaynaa wiigga soo socda tan iyo, ka hor inta aan la bilaabin barnaamijka Monster Hunter World: Iceborne waxaan ogaan doonnaa warar muhiim ah oo ku saabsan ciyaarta, mustaqbalka dhow. fidinta ama xitaa mustaqbalkeeda.